Analogies (တူညီချက်များ) အပိုင်း (၁) by Daw Tin Nwai Win - Myanmar Network
Analogies (တူညီချက်များ) အပိုင်း (၁) by Daw Tin Nwai Win
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on July 1, 2015 at 11:59 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Analogy ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုများတခုနှင့်တခုမည်သို့ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
e.g. Nose is to smell as tongue is to taste.
ဥပမာ။ "နှာခေါင်း" နှင့် "လျှာ"ကို နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် "နှာခေါင်း" သည် "အနံ့အာရုံခံရာ object" ဖြစ်ပြီး "လျှာ"သည် "အရသာခံရာ object" ဖြစ်ကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Direction: Write the correct word on the blank to fill in the missing part of each analogy. The first one has been done for you..
e.g. ____Scissors_____ are to paper as saw is to wood.
fold; scissors; thin
ကွက်လပ်ပါသောစာကြောင်းတကြောင်းနှင့်ထိုကွက်လပ်တွင်သင့်လျော်ရာစကားလုံးကို ရွေးချယ်ရန် စာလုံးသုံးလုံးစီ ပေးထားပါသည်။ ထိုစာလုံးများအနက်မှရွေးချယ်ထားသည့် မှန်ကန်သောစာလုံးကို ရွေးချယ်ပြီး နမူနာပြထားသည့်အတိုင်း ကွက်လပ်တွင်ထည့်သွင်းဖြေဆိုရန်ဖြစ်သည်။
1. Man is to boy as woman is to ________.
mother; girl; lady
2. _______ is to cellar as sky is to ground.
down; attic; up
3. Rag is dust as _______ is to sweep.
floor; straw; broom
4. Freezer is to cold as stove is to _______.
cook; hot; recipe
5. Car is to ______ as book is to book shelf.
ride; gas; garage
6. Window is to _______ as car is to metal.
glass; clear; house
7. Eyes are to seeing as feet are to ________.
legs; walking; shoes
8. Gas is to car as ________ is to lamp.
electricity; plug; cord
9. Refrigerator is to food as ________ as is to clothes.
fold; material; closet
10. Floor is to down as ceiling is to ________.
high; over; up
11. Pillow is to soft as rock is to _______.
dirt; hard; hurt
12. Carpenter is to house as poet is to ________.
verse; novel; writing
13. Lamp is to light as clock it to ________.
time; hand; number
14. _______ is to hand as sole is to foot.
wrist; finger; palm
15. Piglet is to pig as ______ is to kangaroo.
calf; cub; joey
ကွက်လပ်ဖြည့် ဖြေဆိုပြီးပါက အဖြေများနှင့် ရှင်းလင်းရေးသားချက်များကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
e.g. Scissors are to paper as saw is to wood.
ပေးထားသောဝါကျတွင် "paper" နှင့်ပတ်သက်၍
"thin" ပါးလွှာသောစက္ကူဟူ၍ ပေးထားသောစာလုံးသုံးလုံး လုံးဖြင့် "paper" ကိုသုံးရန် သင့်လျော်ပါသော်လည်း analogy ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် "saw is to wood" သစ်သားကို လွှဖြင့်တိုက်ဖြတ်ရသည်နှင့် တူညီစေရန် "Scissors" are to paper ဟု အဖြေမှန်အဖြစ်ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Woman is to lady ကိုရွေးပါမှ other part ဖြစ်သော "Man is to boy" နှင့်ကိုက်ညီမည်ဖြစ်ပါသည်။
"Attic" အိမ်တဆောင်၏ "ထပ်ခိုး" ကို "cellar" မြေအောက်ခန်းနှင့် ပြဆိုသကဲ့သို့ "sky" မိုးကောင်းကင်ကို "ground" မြေကြီးနှင့် antonym ဆန့်ကျင်ဘက်သဘော (အထက်နှင့်အောက်၊ မိုးနှင့်မြေ) ဟူ၍ ခိုင်းနှိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
"Rag" ကော်ဇောကြမ်းနှင့် "dust" ဖုံတို့သည် ဆက်စပ်မှုရှိသကဲ့သို့ "broom" (n) တံမြက်စည်းနှင့် "sweep" (v) လှည်းသည် စသည်ဖြင့် ဝေါဟာရ နှီးနွယ်မှု ရှိပုံကို ခိုင်းနှိုင်းထားပါသည်။
"Freezer" ရေခဲခံအခန်း၏အေးမြသော "cold" ကို "stove" မီးဖို၏ပူသော "hot" နှင့် "cold" and "hot" နှိုင်းယှဉ် ပြဆိုရာ၌ object နှစ်ခုဖြစ်သည့် "freezer"နှင့် "stove" ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။
"Car" ကို "garage" ကားဂိုဒေါင်၊ ကားထားရာနေရာ နှင့် "book"ကို "book shelf" စာအုပ်စင်၊စာအုပ်ထားရာနေရာ၊ ထားသိုရာအရပ်နှစ်ခုကို ခိုင်းနှိုင်းပါသည်။
"Window" ပြူတင်းကို "glass" မှန်ဖြင့်ပြုလုပ်သကဲ့သို့ "car" ကို "metal" သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်သည်ဟူ၍ "glass" and "metal" object နှစ်ခုကိုအခြေခံ၍တွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုပြုလုပ်ထားပါသည်။
"Eyes" မျက်စိကို "seeing" ကြည့်မှုတွင် အသုံးပြုသကဲ့သို့ ၊"feet" ခြေထောက်များကို "walking" လမ်းလျှောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည်ဟူ၍ ခိုင်းနှိုင်းထားပါသည်။
"Gas" ကို "car"တွင်လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုသကဲ့သို့ "electricity" လျှပ်စစ်ကို "lamp" မီးအိမ်၏အလင်းရောင်ရရှိရန် အသုံးပြုပစ္စည်းများအဖြစ် နှိုင်းယှဉ်ခိုင်းနှိုင်းထားပါသည်။
"Refrigerator" ရေခဲသေတ္တာကို "food" အစားအစာထားသိုရန်အဖြစ် အသုံးပြုသကဲ့သို့ "closet" ဗီရိုကို "clothes" အဝတ်အထည်ထားရာအရာအဖြစ်ခိုင်းနှိုင်းပါသည်။
"Floor" ကြမ်းပြင်အခင်းသည် "down" အောက်ခြေတွင်ရှိသကဲ့သို့ "ceiling" မျက်နှာကျက်သည် "up" အထက်တွင်ရှိပုံကို "down" and "up" antonym ဆန့်ကျင်ဘက်ခိုင်းနှိုင်းထားပါသည်။
"Pillow" ခေါင်းအုံးသည် "soft" နူးညံ့ပျော့ပျောင်းမှုကိုဖော်ကျူးပြီး "rock" ကျောက်ခဲသည် "hard" မာကျောမှုကို "soft" and "hard" antonym ဆန့်ကျင်သဘောအရခိုင်းနှိုင်းထားပါသည်။
"Carpenter" လက်သမားသည် "house" အိမ်ဆောက်သူဟုဖော်ညွှန်းသကဲ့သို့ "poet" ကဗျာဆရာသည် "verse" ကဗျာလင်္ကာရေးစပ်သူဟူ၍ လူအသီးသီး၏လုပ်ဆောင်မှုများကို ခိုင်းနှိုင်းပြဆိုထားပါသည်။
"Lamp" မီးအိမ်သည် "light" အလင်းရောင်ပေးဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ "clock" နာရီသည် "time" အချိန်ကိုပြဆိုနိုင်သည်ဟူ၍ အရာဝတ္ထု နှစ်ခုဖြစ်သည့် "lamp" and "clock" တို့၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် တို့ကိုဖော်ပြထားပါသည်။
"Palm" လက်ဖဝါးသည် "hand" လက်တွင်ရှိသကဲ့သို့ "sole" ခြေဖဝါးသည် "foot" ခြေတွင်ရှိသည်ဟု ကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်းတို့၏ တည်ရှိရာနေရာများကိုပြဆိုထားပါသည်။
"Piglet" ဝက်ပေါက်လေးသည်ကြီးလာပါက "pig" ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ "joey" လေးသည် ကြီးလာလျှင် "Kangaroo" ဖြစ်လာမည်ဟူ၍ "young" and "old" ကိုဖော်ပြထားချင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤ တူညီချက်များကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့်
မည်သည့်စကားလုံးများကို ခိုင်းနှိုင်းထပ်တူပြုခြင်းကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် အကျယ်တဝင့်ရေးသားချက်များ၏ သဘောကို နားလည်သုံးသပ်တတ်လာခြင်း
တခါတရံ ဆန့်ကျင်ဘက်စကား (antonym) များကိုပင်ခိုင်းနှိုင်းထားသည်ကိုလေ့လာသိရှိလာခြင်း စသည်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကိုလေ့လာရာ၌ အသုံးဝင်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
တူညီချက်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ဝေါဟာရကြွယ်၍ study skills များ တိုးတက်နိုင်ကြပါစေ။
Comprehensive ၊ Curriculum Basic Skills နှင့် American Education Publishing စာအုပ်တို့မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Analogies (တူညီချက်များ) အပိုင်း (၂) by Daw Tin Nwai Win
Permalink Reply by theintunzaw on July 2, 2015 at 7:44
Permalink Reply by wityeelay on July 2, 2015 at 8:39
Permalink Reply by LwinLwin on July 2, 2015 at 12:10
Permalink Reply by Aung Myint Myat on July 3, 2015 at 15:12
Permalink Reply by myat mon on July 6, 2015 at 20:31